★★ VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.36 Beta + Patch ★★ - Software Guide
Home / Converter / Software / ★★ VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.36 Beta + Patch ★★
★★ VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.36 Beta + Patch ★★ Reviewed by ရန်ကုန်သား on 3:00:00 AM Rating: 5
★★ VSO ConvertXtoDVD 5.2.0.36 Beta + Patch ★★
ရန်ကုန်သား 3:00:00 AM Converter , Software
VSO ConvertXtoDVD ဆော့ဝဲလ်လေးကို Version အသစ်ထွက်တိုင်း ကျနော်အမြဲတမ်းပေးနေကျပါ။ အခု
လည်း Update လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက တော့အားလုံးသိထား
တဲ့အတိုင်း Videos to DVD တွေကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပြီး Subtitle files ဖိုင်တွေကအစခေါ်ယူအသုံး
ပြုနိုင်ပြီး 16:9 widescreen + 4:3 full screen တို့အပြင် ISO output အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ avi, divx, wmv, mkv, xvid, vcd, vob စသည်တို့ကို DVD, video formats လုပ်ပေးနိုင်ပြီး All in one video conversion and burning ဆော့ဝဲလ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 33Mb ရှိပြီး Windows
အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ထဲမှာ Patch ဖိုင်လေးကိုထည့်ပေး
ConvertXtoDVD is software to convert and burn your videos to DVD playable on any home DVD player.
It supports the most popular formats such as avi, divx, xvid, 3gp, mov, mkv, flv, mpeg-1, mpeg2, mpeg4, nsv, dvr-ms, tivo, ts, ifo, vob, asf, wmv, realmedia, rm, rmvb, ogm, etc formats.
It converts your files intoacompliant DVD Video set of files and burns it on DVD media.
ConvertXtoDVD supports NTSC and PAL and automatically creates chapters.
Changes in v5.2.0.35 (Released 2014-11-07):